By Ei Pyae Oo	September 24, 2021	0
သိပ္ပံအမည်။ Areca catechu L. မျိုးရင်း။ Arecaceae. အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်း။ အမြစ်များ၊ အသီးများ၊ အပွင့်များ ။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ။ ဆီးနည်းခြင်း၊ ဆီးသွားရန်ခက်ခဲနာကျင်ခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်း၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းမှသွေးထွက်ခြင်း၊ မီးယပ်သွေးပမာဏများစွာဆင်းခြင်း၊ အရေပြားကူးစက်နာများ၊… Continue Reading
သိပ္ပံအမည်။ Piper betle L. မျိုးရင်း။ Piperaceae အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်း။ အရွက်များ၊ အမြစ်များ။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ။ ကင်ဆာရောဂါကို ဆန့်ကျင်ပေးခြင်း၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းကိုနိုင်သောဆေး၊ ငှက်ဖျားရောဂါ ကိုနှိမ်နိုင်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးတိုးပွားခြင်းကိုရပ်စေခြင်း၊ မှိုရောဂါပျောက်ဆေး၊ ဆဲလ်များပျက်ဆီးယိုယွင်းခြင်းကိုတားမြစ်စေသော ပစ္စည်း၊ ဆီးချိုနှိမ်ဆေး၊… Continue Reading
By Ei Pyae Oo	September 8, 2019	0
သိပ္ပံအမည်။ Amorphophallus campanulatus Blume. မျိုးရင်း။ Araceae အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်း။ ဥ။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ။ ဆီးအိမ်လုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ရှိအဆီများကျစေခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်နှလုံးအားကောင်းစေခြင်း။
သိပ္ပံအမည်။ Nerium oleander l. မျိုးရင်း။ Apocynaceae အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်း။ အရွက်များ၊ အမြစ်။ (မှတ်ချက်။ အပင်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်အလွန်ပြင်းထန်သောအဆိပ်ရှိပါသည်။) ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ။ ကင်ဆာ၊ ကင်းမြီးကောက်အဆိပ်ဖြေနိုင်ခြင်း၊ ပွေး၊ အနာကြီးရောဂါ၊ အရေပြား ရောဂါများ၊ ဆီးရွှင်စေသောဆေး၊… Continue Reading
By Ei Pyae Oo	March 29, 2019	0
သိပ္ပံအမည်။ Impatiens balsamina L. မျိုးရင်း။ Balsaminaceae အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်း။ အပင်၊ ပင်စည်၊ အရွက်များ၊ အပွင့်များ။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ။ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေခြင်း၊ နာကျင် ကိုက်ခဲမှုကိုသက်သာစေခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း။
By Ei Pyae Oo	March 26, 2019	0
သိပ္ပံအမည်။ Plumbago zeylanica L. မျိုးရင်း။ Plumbaginaceae အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်း။ အပင်။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ။ မီးယပ်ပေါ်စဉ် နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရခြင်း၊ သာမန်မီးယပ်သွေးဆင်းခြင်း မဟုတ်သော သားအိမ်မှ သွေးယိုဆင်းခြင်း၊ မီးယပ်သွေးမပေါ်ခြင်း၊ ဓမ္မတာမမှန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောအရေပြားရောဂါများ (ယားယံခြင်း၊ ထုံကျင်ခြင်း၊… Continue Reading
By Ei Pyae Oo	February 19, 2019	0
သိပ္ပံအမည်။ Swietenia macrophylla King မျိုးရင်း။ Meliaceae အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်း။ အခေါက်၊ အစေ့။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ။ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ဌက်ဖျားရောဂါ၊ ဖျားခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါ။
သိပ္ပံအမည်။ Justicia adhatoda L. မျိုးရင်း။ Acanthaceae အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်း။ အပင်၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီး၊ အမြစ်။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ။ သွေးအန်ခြင်း၊ ဝမ်းထဲသွေးပါနေခြင်း (ဝမ်းအမဲရောင်သွားခြင်း) ၊ အဆုတ်နှင့်ဆိုင်သောရောဂါများ၊ လိပ်ခေါင်းမှသွေးထွက်ခြင်း၊… Continue Reading
By Ei Pyae Oo	February 8, 2019	0
သိပ္ပံအမည်။ Murraya koenigii (L.) Spreng. မျိုးရင်း။ Rutaceae အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်း။ အရွက်၊ အခေါက်၊ အမြစ်။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ။ ရင်ကျပ် ပန်းနာ၊ သံ ရောဂါ၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ လေထိုးနာ၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊… Continue Reading
သိပ္ပံအမည်။ Sauropus albicans Blume မျိုးရင်း။ Euporbiaceae အသုံးပြုသောအစိတ်အပိုင်း။ အရွက်များ၊ အသီးများ၊ အပွင့်များ၊ အမြစ်များ။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ။ အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါ၊ အစာအိမ်မှ သွေးထွက်ခြင်း၊ ဆီးရောဂါ၊ ဖောရောင်ခြင်း၊ နားထဲ… Continue Reading